Taovolony lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Taovolony lalao ho an'ny ankizivavy
Faly izahay hanatitra ny ankizivavy afaka hilalao lalao an-tserasera Fandram-bolo, izay ny ody ny fampianarana mandeha, ny zava-miafina ny amin'ny mpanakanto, fomba fanodinana. Ski nahaleo volo mba hisafidy ny tsara loko sy ny endriky ny olona ny fahafahana hiova mihoatra fanekena. Ireo fahafinaretana ianao dia hianatra ny fomba hikarakarana ny volo sy saro-pantarina mampiasa siny eo amin'ny talantalana amin'ny fomba ara-potoana. Tsy maintsy nanapaka maro samihafa ny mpanjifa: olo-malaza, Fairy-angano litera, ankizy sy ny biby fiompy. Araho ny manosika, ianao tsy maintsy hiatrehana andraikitra.
Hair care zaza Hazel
Ariel taova vaovao taovolo
Rainbow pony tena haircuts
Lalao fohy avy hatrany
Week miaramila fomba
Makiazy ny vehivavy
Taovolo Neon an'i Eliza
Mahafinaritra tarehy volo
Perfect Girl Mpamorona
Princess fetin'ny lainga Hair Salon
Ny akanjo ho an'ny zazavavy-saka
Miverina any amin'ny sekoly fashionistas
Princess Princess Rainbow Unicorn Hair Salon
Lasa Fashion Designer
Salama volo amin'ny biby
Equestria Girls Voalohany ao an-tsekoly
Roxelane Marina Ovao ho Up
Panda Hair ve
Krismasy Girl Dress Up
Andriambavy Winter Trip
Herisetra amin'ny fahavaratra
Equestria Girls Diplaoma Party
Ny taovolon'ny frantsay frantsay vaovao
Ellie sy Ben Date Night
Long Princess Princess Prom
Fampandrenesana sary amin'ny sary
Tia Horoscope Ho an'ny Princesses
Trend Krismasy Fitehirizana ny Krismasy 2019
Ireo karazana Spots rehetra
Ny endrika tsara tarehy Princess
Miss Charming Unicorn taovolony
Princess Neon Hairstyles Spring Spring
Lalao Fandram-bolo tamin'ny Category:
Farany Taovolony lalao ho an'ny ankizivavy
Fanambarana taovolo momba ny taovolo an'i Hailey
My Avatar Manga
Hacks momba ny volo andriambavy
Fanambarana haingon-taovolo taovolo mafana an'i Ava
Sehatry ny Regency
Lalao Online Rehetra Taovolony lalao ho an'ny ankizivavy
izahay mitady ny fomba nandritra ny lalao bolo
Fa ny zazavavy dia zava-dehibe fa ny fisaintsainana eo amin'ny fitaratra sitraky. Izany no tarehiny singa ilaina rehetra: fanoharana, akanjo, ho-up sy ny taovolony. Fa raha afaka manova akanjo, ho-ny fiovana, ny hihety volo dia ela mandra-volo indray dia tsy mitombo. Ary dia toy izany no mifanaraka amin'ny sary, dia ilaina ny hampiasa tsara stylist.
Na dia izany aza, dia tsy maintsy mahatakatra ny zava-dehibe aloha fitsipika – ny volo nitodika, dia mila salama sy tsara-nampiofanina volo. Raha reraka izy ireo loko, varnishes, volo dryers sy vy mba handamina ny volo, dia mijery ny ho lalodalovana, tsy nanana aina. Split mifarana sy ny mololo mifikitra an-lafiny curls tsy manome na iza na iza mampiasa fitaovana arifomba. Nefa tsy midika izany fa tokony hanome ny fanandramana tamin'ny volon-dohany – fotsiny tsy manao izany matetika, fa ny saina bebe kokoa no nandoa ny fanamafisana orina, hydration sy ny sakafo. Manao saron-tava, misafidy ny tsara shampoo, rivotra-miankina, mampiasa menaka fiarovana ny ala nenina raha fanamainana volo. Ny fomba hanaovana izany, dia lazao ny lalao bolo. Ihany koa izy ireo hanampy anao hifidy ny taovolo tonga lafatra ho anareo, dia ataovy mpianatra ny sasany styling fitaka.
Ny tena mahafinaritra ny volo
mba hahatsapa tsara ankizivavy lamaody sy ny raharaha rehefa tonga ny miseho. Ny lalao ho an'ny tovovavy Fandram-bolo no hitari-dalana anareo amin'ny tantara, izay hanangona be dia be ny hevitra tany am-boalohany ho an'ny pilings, toy ny ampiharina.
Fa loha zava-nitranga
Fa ny solontenan'ny subcultures
Na ponytail tsotra dia mijery tsara raha mifanaraka amin'ny zava-misy. Fa amin'ny volo lasitike ela tsy handeha ho any amin'ny prom na ny fampakaram-bady. Noho ny lesona lalao an-tserasera no Fandram-bolo, ianareo dia hianatra ny teknika ampiasain'ny maoderina stylists, fametrahana kofehy amin'ny be pitsiny curls ka niraikitra miaraka mba tsy hita maso misy tsimatra.
Raha mankany amin'ny antoko miaraka amin'ny akanjo fanaovana karnavaly, dia ilaina ny hikarakara ny volo izay mifanaraka amin'ny andraikitra voafantina. Ny Mazava ho azy fa dia nandoko, locking styling gels sy varnishes, hairpins sy fitaovana hafa. Tapa-kevitra mba hahatonga ny volo eo amin'ny fomba mpanao punk, hippie, emo sy vonona, dia ho fantatrao ny toetra sy hampihatra modely, vonona hanaraka ho toy izany fanandramana.
Fa ny raharaha fivoriana dia ilaina ny mifidy zavatra mahazatra, hentitra, fa mahafatifaty. Ary indray mandeha indray tonga any amin'ny hamonjy ny lalao amin'ny bolo. Misy mihitsy aza ny sasany izay, mampakatra ny sary, dia afaka mampihatra ny safidy samy hafa haircuts, volo styling, volo loko sy ny lavany. Ve ianao mankafy zavatra tanteraka ifotony – Bang, asymmetry boyish sokina.
manampy ny olona sy ny biby mahita ny fomba
Tsy maintsy milalao Fandram-bolo, ny olona manompo efitrano ny tanora izay tonga tsy ho tapaka, fa ihany koa ny hanatsara ny endriky goatee, sideburns, volombava na hanaratra. Mpanjifa tsy tapaka ireo olo-malaza, izay manaraka ny fahitana. Azo antoka ianao tonga amin'ny fomba vaovao mahaliana azy ireo, na manao didy iray manokana, mifanaraka ny andraikiny vaovao. Art hihety volo sy ny sary hoso-doko volony biby tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nankafy ilay Tompon'ny maro, malaza be biby fiompy. Tsy ny alika ihany no tonga any amin'ny Salon, fa koa ny saka. Fa tena mihetsiketsika foana izy ireo sy ny asa mafy ny asa.
sariitatra litera sy ny saribakoly – sokajy hafa ny mpanjifa amin'ny lamaody taovolony. Barbie, Bratz, Monster Avo, matoatoa, mermaids sy andriambavy tonga tsy tapaka ny Magicien mba hamelombelona ny endriky ny curls. Miandry ny anjarany sy ny mpanara-pony vahiny Pou, SpongeBob. Arm fitaovana, ary mampiseho ny ditry ny tompony stylist.